Momba ny BiasLighting.com sy The MediaLight - MediaLight Bias Lighting
Momba ny BiasLighting.com sy The MediaLight
BiasLighting.com dia ampahany amin'ny Scenic Labs, LLC, mpanonta ny sasany amin'ireo vokatra fanatsarana horonantsary malaza manerantany - ao anatin'izany ny Spear & Munsil Benchmark, Colorgrade LEDs ary ny MediaLight Bias Lighting.
Ny fikambanana manara-penitra rehetra dia mamporisika ny jiro mitongilana ho an'ny sary marina ary tsapanay fa misy ny fotoana hanesorana ny fisavoritahana eo amin'ny tsena amin'ny famoronana vahaolana hazavana mitongilana 6500K.
Na dia ireo mpankafy teatra an-trano aza no tena nifantohanay, ny SystemLight Bias Lighting System antsika dia voaporofo fa malaza kokoa amin'ireo colourists sy editor. Ary na dia mino aza ny mahita dia manana ihany koa izy ireo fitaovana hanamarinana ny filazanay.
I BiasLighting.com dia azo atao amin'ireto fomba manaraka ireto:
Na izany aza, mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka na chat amin'ny fangatahana vokatra. Manana fampahalalana marobe tianay zaraina amin'ny tranokala izahay, ary tsy dia mora loatra ny mizara ity fampahalalana ity amin'ny alàlan'ny telefaona. Raha tsy afaka mamaly ny fanontanianao amin'ny alàlan'ny chat na mailaka izahay dia faly miova amin'ny telefaona fa tsy mandray baiko an-tariby. Raha tsy famotopotorana momba ny vokatra ity dia faly izahay miresaka amin'ny telefaona, fa andao handamina ny antso amin'ny alàlan'ny mailaka. Noho ny hamaroan'ny antso spam azontsika dia matetika tsy mandeha ny mpiantso anay, indrindra aorian'ny ora fiasana 9-5.
Ny adiresy mail an'ny sifotra ho an'ny fiverenana sy ny fangatahana fiantohana: